Auto China 2018 မှာ လျှပ်စစ်ယာဉ် ၃ စီးကိုပြသသွားဖို့ရှိနေတဲ့ Nissan! – AutoMyanmar
Auto China 2018 မှာ လျှပ်စစ်ယာဉ် ၃ စီးကိုပြသသွားဖို့ရှိနေတဲ့ Nissan!
Nissan ဟာ ပေကျင်းမြို့မှာကျင်းပသွားမယ့် Auto China 2018 မှာ Electric Vehicle (EV) ၃ စီးကို ပြသသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nissan Leaf, Nissan IMx Kuro နဲ့ Nissan Terra အစရှိတဲ့ EV တွေကိုပြသသွားမှာပါ။ အဲ့လို EV line-up ကြီးကို တရုတ် Auto Show မှာ တစ်ပြိုင်တည်းပြသလိုက်တာဟာ Nissan ရဲ့တရုတ်စျေးကွက်မှာနေရာယူထားနိုင်မှုအတိုင်းအတာကိုဖော်ပြလိုက်သလိုပါပဲ။
Auto China 2018 မှာချပြသွားမယ့် မော်ဒယ်တွေဟာ Nissan ရဲ့ Midterm plan “Nissan M.O.V.E to 2022” နဲ့ တရုတ်မှာရှိတဲ့ Nissan ရဲ့မဟာမိတ်ကြီး Dongfeng Motor Group (DFG) midterm plan “Triple One” တို့အတွက်အထောက်အကူအများကြီးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
Nissan ရဲ့ “M.O.V.E to 2022” ကတော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ 16.5 trillion ယန်ဝင်ငွေရရှိတဲ့ အထိရောင်းချနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲထားတာပါ၊ DFG ရဲ့ “Triple One” အစီအစဉ်ကတော့ နှစ်စဉ် ယာဉ်ပေါင်း 2.6 million အထိရောင်းချနိုင်ဖို့ နဲ့ တရုတ်မှာအခြေအခိုင်ဆုံး Brand တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nissan ဟာ Auto China 2018 မှာ EV တွေအပြင် e-POWER electrified powertrain technology ကိုလည်းမိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Auto China မှာ EV တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်…
Nissan Leaf ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ EV ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ မတ်လမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ New York International Auto Show မှာ “2018 World Green Car” ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး Nissan Intelligent Mobility ရဲ့ Flagship တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Leaf စထွက်တဲ့အချိန်ကနေ အခုချိန်အထိ ယာဉ်အရေအတွက် စုစုပေါင်း ၃ သိန်းကျော်အထိရောင်းချပြီးနေပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး EV အဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့အထိအောင်မြင်နေတာပါ။
Nissan IMx KURO ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ Geneva Motor Show မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ EV ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Electric crossover concept vehicle ဖြစ်ပြီး ယာဉ်နဲ့မောင်းနှင်သူကြား ချိတ်ဆက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ vehicle ဖြစ်တာကြောင့် ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိပြီး သက်သောင့်သက်သာနဲ့မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ ယာဉ်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။
Nissan Terra ကတော့ Nissan Frame နဲ့ LCV (Light Commercial Vehicle) division တို့ ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ Vehicle အသစ်ကလေးပါ။ Frame-based SUV အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Auto China 2018 ရောက်မှမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (အဲ့တော့ပြောစရာသိပ်မရှိပါဘူး 😆)
အခမ်းအနားကိုတော့ လာမယ့် ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး တည်နေရာအတိအကျကတော့ China International Exhibitions Center မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Vehicle အလန်းအစားကြီးတွေနဲ့ Technology အမိုက်စားလေးတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တာကြောင့် လမ်းကြုံရင် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ Auto Show တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Motor Show and Event, Nissan